दिनको जम्मा तीस रुपैयाँ बचत गर्नुहोस र बन्नुहोस करोडपती, ल हेरौं आईडिया सहित – Sunaulo Nepal TV
करोडपति बन्ने रहर कसलाई पो नहोला र ? तर, कसरी बन्ने भन्ने बाटोचाहीँ धेरैले नदेखेका हुन सक्छन् । त्यसैले धेरै मान्छेहरु पैसा कमाउने लालचमा नकरात्मक काम गर्न पुग्छन् । र, एकदिन नराम्रोसँग फस्छन् ।आज हामी तपाईँलाई करोडपति बन्ने सरल उपाय सिकाउँदै छौं ।
करोडपति हुने सजिलो र दिगो बाटो भनेको सानै उमेरदेखि पैसाको महत्व बुझ्ने र लगानी गर्न शुरु गर्ने नै हो । वारेन बफेटले ११ बर्षको हुँदा लगानी गर्न शुरु गरेका थिए । अहिले उनी संसारकै दोस्रो धनी ब्यक्ति भइसेका छन् ।अब लगानी गर्न पैसा चाहियो । पैसा आउने भनेको बचत गरेर हो । तपाईं जतिसुकै कमाउनुस् । तर अर्थ राख्ने भनेको तपाइंको बचतले नै हो । अर्थात् कुनैपनि मान्छे कमाएर धनी बन्न सक्दैन, धनी बन्न त कमएको पैसा बचत गर्न सक्नुपर्छ ।
आफ्नो कमाई र दैनिक खर्चको बिवरण राख्नु बचत शुरु गर्नु पहिलाको सबैभन्दा महत्वपूर्ण कदम हो । केहि दिनलाई असहज महसुस हुने वा दैनिक खर्च बिर्सने भए पनि १०/१५ दिन पछि यो सहज लाग्न थाल्छ र बचत गर्न ठूलो मद्दत पुग्छ ।
लुगाफाटा, तरकारी, दाल चामल, घर भाडा आदिको खर्च बिवरण राखेर पछि त्यस बिवरणमा आँखा डुँलाउँदा खर्चको बिश्लेषण र पुनसंरचना गर्न सकिन्छ । यस्तो गर्दा सानो खर्च कटौटी गर्ने गोरेटो फेला पर्यो भने मात्र पनि तपाईं करोडपति बन्ने हाइवेमामा अघि बढ्न सक्नुहुन्छ ।
बचतको महत्व कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा त बैंकहरुमा आएको पछिल्लो तरलता संकटले नै प्रष्ट पार्छ । सर्वसाधारणको निक्षेप उनीहरुले गर्ने लगानी भन्दा कम भएर नै पछिल्लो समस्या आएको हो । अर्थात्, बचत कम हुँदा आफ्नो घरपरिवार मात्र नभएर समग्र अर्थतन्त्रमा नै नकारात्मक असा पर्छ । त्यसैले बिकसित देशहरुमा स-साना नानीहरुको पनि बैंक खाता खोल्ने र बचत गर्न सिकाउने परम्परा छ ।
यसरी खर्च कटौटी गरी दैनिक ३० रुपैंयामात्र वा महिनाको ९०० रुपैंयाँ मात्र बचत गर्न सक्नु भयो भने पनि तपाईं करोडपति बन्न सक्नुहुन्छ ।तपाईं अहिले २० बर्षको हुनुहुन्छ र दैनिक ३० रुपैंयाँ बचत गर्नुभयो भने ६० बर्षको उमेरमा तपाई करोडपति बन्न सक्नुहुन्छ । दैनिक ३० रुपैंयाँको हिसाबले महिनामा ९०० रुपैंयाँ बचत गर्नुस् । यहि ९०० रुपैंयाँ ४० बर्षसम्म जोखिम कम हुने कुनै म्युचल फण्डमा लगानी गर्नुस् । म्युचल फण्डले सामान्यत १२/१३ प्रतिशत रिर्टन दिन्छ । यति गर्नुभयो भने तपाईंको लगानीले गुणात्मक फड्को मार्छ ।
यस्तो अवसर पाको उमेरको मान्छेको लागि पनि उत्तिकै लाभदायक छ । तर बचत भने थोरै बढाउनुपर्ने हुन्छ । जस्तो, ३० बर्षको मानिसले दैनिक ९५ रुपैंयाँ, अर्थात् महिनाको २८ सय ५० रुपैंयाँ बचत गर्नुपर्ने हुन्छ ।तपाईंलाई लगिरहेको होला कि ४० बर्ष भनेको धेरै लामो समय हो । अलि छिटो गर्ने केहि उपाय छ ?
यदि तपाईंको म्युच्युअल फण्ड राम्रो छ र १५ प्रतिशत नाफा दिन्छ भने तपाईं ३५ बर्षमा करोडपति हुन सक्नुहुन्छ । अझ म्युचल फण्डले दिने लाभांस पनि लगानीगर्दै जानुभयो भने अझै छिटो हुनसक्छ ।हाल नेपालमा ५ देखि ७ बर्षसम्मका म्युचल फण्डहरु छन् । आगामी दिनहरुमा नयाँ म्युच्युअल फण्डहरु आउने क्रम जारी नै रहन्छ ।
यहाँ ब्यवसायिक र अनुभवी मानिसहरुले अध्ययन अनुसन्धान गरेर तपाईंको पैसा लगानी गर्ने हुनाले म्युचुअल फण्डको उदाहरण दिइएको हो । यदि आफैं सेयर बजारमा लगानी गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईं अझै चाँडै धनी हुन सक्नुहुन्छ । तर, आफैं सेयेर बजार पस्दा जोखिम भने धेरै हुन्छ । याद राख्नुहोस्, बारेन बफेट सेयरमा लगानी गरेर विश्वको दोस्रो धनी व्यक्ति हुन सफल भएका हुन् ।
Previous यति साना बच्चा टुहुरो हुने भनेको सुनेपछि धेरै गाह्रो भएर बाथरुम छिरेर रोए ….
Next म्याग्दीमा वर्षा र हावाहुरीले दुई सय हेक्टरको धानबाली नष्ट